အုနျးရညျ မှာ ဘာတှေ ပါလဲ???? | OnDoctor
ရာသီဥတု က တဖြည်းဖြည်း ပူတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတာ နှင့် အမျှ အခုလို အချိန်ဆို တောရော မြို့ပါ မကျန် အုန်းရည်ရောင်းတဲ့ သူတွေ များလာသလို သောက်တဲ့ သူတွေ လည်း တဖြည်းဖြည်း များလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အုန်းရည် သောက်ရင် ကောင်းလား မကောင်းလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကတော့ လူအများကြားမှာ အမြဲ ရှိနေပါတယ်။ တကယ်ကော အုန်းရည် က ဘယ်လို အာနိသင်တွေ ပေးသလဲ????
ပထမဆုံး အုန်းရည်တစ်ခွက် (240 ml) မှာ ပါတဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ အုန်းရည် တစ်ခွက်မှာ ဆိုရင်
ကယ်လိုရီ – 45
အဆီဓါတ် – 0.5 gram
ကိုလက်စထရော –0gram
ဆိုဒီယမ် (ဆားဓါတ်) – 252 mg
ပိုတက်ဆီယမ် – 600 mg
ကာဗိုပိာုက်ဒရိတ် –9gram
အမျှင်ဓါတ် – 2.6 gram
အသားဓါတ် – 1.7 gram
မဂ္ဂနီဆီယမ် ဓါတ် တို့ပါဝင်ပါတယ်။
အုန်းရည် က ကယ်လိုရီနည်းပြီး ကိုလက်စထရော မပါဝင် တဲ့ သဘာဝ အားဖြည့်ရည်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ မှာပါတဲ့ ပိုတက်ဆီယမ် ပမာဏ က ပိုတက်ဆီယမ် ကြွယ်ဝ လှပါပြီ ဆိုတဲ့ ငှက်ပျောသီး ထက်တောင် ပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် သောက်မယ်ဆိုရင် တခွက် (240 ml) ထက်တော့ မပိုသင့်ပါ။ နောက်တခု အရေးကြီးတာ ကတော့ ကျောက်ကပ် မကောင်းတဲ့ သူတွေ ပိုတက်ဆီယမ် တက်နေချိန်မှာ မသောက်သင့်ပါဘူး။ ပုံမှန် ချိန်ဆိုရင်တောင် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပြီးမှ သောက်သင့် မသောက်သင့် သောက်လို့ရတယ် ဆိုရင်လည်း ပမာဏ အတိုင်းအတာ ကို သေချာ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ချွေးအရမ်းထွက်သွားရင် ချွေးနဲ့ အတူ သတ္တု ဓါတ်တွေ ပါဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်။ အဓိက ဆိုဒီယမ် လိုမျိုး ဆားဓါတ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားရင် စိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီး နုံးလာတတ်ပါတယ်။ အဲ့လို အချိန်ဆိုရင်တော့ အုန်းရေ သောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခွက်ထက်တော့ မပိုပါစေနှင့်။
ထုံးစံ အတိုင်း အုန်းရည်မှာလည်း ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင် သတ္တိရှိတဲ့ ဗီတာမင် နှင့် သတ္တု ဓါတ်များစွာ ပါဝင်တဲ့ အတွက် အိုမင်းရင့်ရော်မှု့ ကို တဖက်တလမ်းကနေ ကာကွယ်ပေးပြန်ပါတယ်။
ခန္ဓာ ကိုယ်အတွင်းရှိ ဓါတ်တိုးပစ္စည်းများ ကို လျှော့ချပေးတဲ့ အတွက် ဓါတ်တိုးပစ္စည်း တွေ များလာရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောတက်ခြင်း (Triglycerides) စတာတွေ ကို လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ထို့အတူ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင် သတ္တိ ရှိတဲ့ အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဆဲလ်များ ဓါတ်တိုးပစ္စည်းများကြောင့် ပျက်ဆီး အသွင်း ပြောင်းပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အလွန် အန္တရာယ်များတဲ့ ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု့ကို လည်း တဖက်တလမ်း ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆီးချို ဝေဒနာရှင်တွေ အတွက်လည်း မဂ္ဂနီဆီယမ် ပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အင်ဆူလင် ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းအား ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဆီးချိုပမာဏ ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ Fasting Blood Glucose level ကိုလျှော့ချပေးတဲ့ အပြင် HbA1c ကိုပါ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
အမျှင်ဓါတ် ကြွယ်ဝ တဲ့ အတွက် သွေးတွင်း ကိုလက်စထရော ကို ကျစေနိုင်ပါတယ်။
Triglycerides ကျစေတဲ့ အတွက် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ အသည်းအဆီဖုံးတာဂတွေ ကို လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အုန်းရည် တစ်ခွက် (240 ml) မှာ ပိုတက်ဆီယမ် 600 mg ပါတဲ့အတွက် သွေးတိုး ရောဂါ ဝေဒနာရှင်တွေ အတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ကျစေပါတယ်။
ဆိုဒီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ကယ်လဆီယမ် နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ် တို့ ပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် တာဝေး အပြေးသမားများ၊ အချိန် အကြာကြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တတ်တဲ့ သူတွေ အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
ရေဓါတ် ကိုလည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့ အပြင် သတ္တု ဓါတ်များကိုပါ ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အုန်းရည်သောက်ရင် ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် တခွက် (240 ml) ထက်တော့ မပိုသင့်ပါဘူး။ ဒီ့အပြင် အုန်းရည် ဆိုပြီး အုန်းနို့ တော့ မသောက်သင့်ပါဘူး။ ကိုလက်စထရော နှင့် triglycerides များစွာပါဝင်တဲ့ အတွက် ကျန်းမာရေး အတွက် မကောင်းပါဘူး။
ရာသီဥတု က တဖွညျးဖွညျး ပူတဲ့ဘကျကိုရောကျလာတာ နှငျ့ အမြှ အခုလို အခြိနျဆို တောရော မွို့ပါ မကနျြ အုနျးရညျရောငျးတဲ့ သူတှေ မြားလာသလို သောကျတဲ့ သူတှေ လညျး တဖွညျးဖွညျး မြားလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အုနျးရညျ သောကျရငျ ကောငျးလား မကောငျးလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှေ ကတော့ လူအမြားကွားမှာ အမွဲ ရှိနပေါတယျ။ တကယျကော အုနျးရညျ က ဘယျလို အာနိသငျတှေ ပေးသလဲ????
ပထမဆုံး အုနျးရညျတဈခှကျ (240 ml) မှာ ပါတဲ့ အာဟာရတနျဖိုးကို သိထားဖို့လိုပါတယျ။ အုနျးရညျ တဈခှကျမှာ ဆိုရငျ
ကယျလိုရီ – 45
အဆီဓါတျ – 0.5 gram
ကိုလကျစထရော –0gram
ဆိုဒီယမျ (ဆားဓါတျ) – 252 mg
ပိုတကျဆီယမျ – 600 mg
ကာဗိုပိာုကျဒရိတျ –9gram
အမြှငျဓါတျ – 2.6 gram
အသားဓါတျ – 1.7 gram
မဂ်ဂနီဆီယမျ ဓါတျ တို့ပါဝငျပါတယျ။
အုနျးရညျ က ကယျလိုရီနညျးပွီး ကိုလကျစထရော မပါဝငျ တဲ့ သဘာဝ အားဖွညျ့ရညျလို့ပွောလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ မှာပါတဲ့ ပိုတကျဆီယမျ ပမာဏ က ပိုတကျဆီယမျ ကွှယျဝ လှပါပွီ ဆိုတဲ့ ငှကျပြောသီး ထကျတောငျ ပိုမြားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သောကျမယျဆိုရငျ တခှကျ (240 ml) ထကျတော့ မပိုသငျ့ပါ။ နောကျတခု အရေးကွီးတာ ကတော့ ကြောကျကပျ မကောငျးတဲ့ သူတှေ ပိုတကျဆီယမျ တကျနခြေိနျမှာ မသောကျသငျ့ပါဘူး။ ပုံမှနျ ခြိနျဆိုရငျတောငျ သကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျနဲ့ သခြောဆှေးနှေး တိုငျပငျပွီးမှ သောကျသငျ့ မသောကျသငျ့ သောကျလို့ရတယျ ဆိုရငျလညျး ပမာဏ အတိုငျးအတာ ကို သခြော ဆှေးနှေးသငျ့ပါတယျ။
ခြှေးအရမျးထှကျသှားရငျ ခြှေးနဲ့ အတူ သတ်တု ဓါတျတှေ ပါဆုံးရှုံးသှားတတျပါတယျ။ အဓိက ဆိုဒီယမျ လိုမြိုး ဆားဓါတျတှေ ဆုံးရှုံးသှားရငျ စိတျတှရှေုပျထှေးပွီး နုံးလာတတျပါတယျ။ အဲ့လို အခြိနျဆိုရငျတော့ အုနျးရေ သောကျပေးလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခှကျထကျတော့ မပိုပါစနှေငျ့။
ထုံးစံ အတိုငျး အုနျးရညျမှာလညျး ဓါတျတိုးဆနျ့ကငျြ သတ်တိရှိတဲ့ ဗီတာမငျ နှငျ့ သတ်တု ဓါတျမြားစှာ ပါဝငျတဲ့ အတှကျ အိုမငျးရငျ့ရျောမှု့ ကို တဖကျတလမျးကနေ ကာကှယျပေးပွနျပါတယျ။
ခန်ဓာ ကိုယျအတှငျးရှိ ဓါတျတိုးပစ်စညျးမြား ကို လြှော့ခပြေးတဲ့ အတှကျ ဓါတျတိုးပစ်စညျး တှေ မြားလာရငျ ဖွဈနိုငျတဲ့ သှေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ၊ သှေးတှငျး ကိုလကျစထရောတကျခွငျး (Triglycerides) စတာတှေ ကို လညျးကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ထို့အတူ ဓါတျတိုးဆနျ့ကငျြ သတ်တိ ရှိတဲ့ အတှကျ ခန်ဓာကိုယျရှိ ဆဲလျမြား ဓါတျတိုးပစ်စညျးမြားကွောငျ့ ပကျြဆီး အသှငျး ပွောငျးပွီး နောကျဆကျတှဲ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ အလှနျ အန်တရာယျမြားတဲ့ ကငျဆာ ရောဂါ ဖွဈပှားမှု့ကို လညျး တဖကျတလမျး ကနေ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ဆီးခြို ဝဒေနာရှငျတှေ အတှကျလညျး မဂ်ဂနီဆီယမျ ပါဝငျတဲ့ အတှကျကွောငျ့ အငျဆူလငျ ရဲ့ လုပျနိုငျစှမျးအား ကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျတဲ့အတှကျ ဆီးခြိုပမာဏ ကို ထိနျးညှိပေးနိုငျပါတယျ။ Fasting Blood Glucose level ကိုလြှော့ခပြေးတဲ့ အပွငျ HbA1c ကိုပါ လြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။
အမြှငျဓါတျ ကွှယျဝ တဲ့ အတှကျ သှေးတှငျး ကိုလကျစထရော ကို ကစြနေိုငျပါတယျ။
Triglycerides ကစြတေဲ့ အတှကျ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ၊ အသညျးအဆီဖုံးတာဂတှေ ကို လညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
အုနျးရညျ တဈခှကျ (240 ml) မှာ ပိုတကျဆီယမျ 600 mg ပါတဲ့အတှကျ သှေးတိုး ရောဂါ ဝဒေနာရှငျတှေ အတှကျ သငျ့လြျောပါတယျ။ သှေးပေါငျကစြပေါတယျ။
ဆိုဒီယမျ၊ ပိုတကျဆီယမျ၊ ကယျလဆီယမျ နှငျ့ မဂ်ဂနီဆီယမျ တို့ ပါဝငျတဲ့ အတှကျကွောငျ့ တာဝေး အပွေးသမားမြား၊ အခြိနျ အကွာကွီး လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျတတျတဲ့ သူတှေ အတှကျ သငျ့တျောပါတယျ။
ရဓေါတျ ကိုလညျး ပွနျလညျဖွညျ့တငျးပေးတဲ့ အပွငျ သတ်တု ဓါတျမြားကိုပါ ဖွညျ့တငျးပေးနိုငျပါတယျ။